के यु ट्रन होला त जसपा? काङ्ग्रेस सभापति सङ भेटघाट – Sthaniya Sarkar | - Nepal's No.1 News portal
के यु ट्रन होला त जसपा? काङ्ग्रेस सभापति सङ भेटघाट
काठमाडौं : २७ गतेको तयारिस्वरुप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले भेटवार्ता गरेका छन् ।
देउवालाई भेट्न ठाकुर र महतो आइतबार विहान देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । उनीहरु डेढ घण्टा छलफल गरेर फर्किएको जसपाका एक नेताले बताए ।
ठाकुर र महतो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा थिए । जसपाकै अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने ओलीको विकल्पमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । आगामी सरकारको नेतृत्वको विषयमा दुई धारमा विभाजित जसपाले कसको पक्षमा उभिने भनेर औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।